Ukhukhamba kungukudla okugcweziwe kwizisombululo ezinosawoti noma ze-acid ezisiza ukuvikela ukonakaliswa. Kuyasiza nokugcina futhi kunambitheke ukunambitheka nokuthungwa kokudla.
Ukulondoloza vs Ukuvutshelwa
Umehluko phakathi kokudla okuthwetshwe nokuvundile ngukuthi imikhiqizo eluthiwe ayizange iqhubeke nenqubo yokubila ebangelwa amagciwane anenzuzo. Imikhiqizo ebilisiwe ingafakwa kwisisombululo seviniga kasawoti ngemuva kwenqubo yokuvutshelwa. (Isihloko sokuvutshelwa simbozwe kwenye indatshana ochungechungeni lwe-Food Processing).
Cishe noma iyiphi imifino, kanye nezithelo nokunye ukudla, kungalondolozwa. Imifino eyaziwayo yokuthathwa ifaka i-beetroot (i-blanch ukususa isikhumba), ukhukhamba, i-artichoke, upelepele, iziqobelo, i-okra, isithombo kanye no-anyanisi.
Utamatisi we-Cherry ungagcinwa uphelele, izaqathi zingabunjiwe bese zisikiwe zibe yimichilo yezikebhe noma imijikelezo, kuyilapho imifino eluhlaza enjenge-asparagus noma ubhontshisi isikwa imizuzu embalwa bese ifakwa emanzini eqhwa ngaphambi kokuba ingezwe ku-brine eyinqolobane.
Izithelo ezihlotshisiwe zifaka ama-apula, amapetshisi (i-blanch ukususa izikhumba), ulamula, umhlanga wamakhabe, uphayinaphu namakhiwane. Ukudla okunye okuzuzisa ukukha amanzi kufaka phakathi ama-nasturtiums, fiddlehead ferns, inyama efana nengulube nenhlanzi kanye ne-tofu namaqanda.
Abanye abapheki bengeza i-beetroot kwi-brine yokukhetha amaqanda abiliswe kanzima ukuze inikeze umbala opinki ungqimba lwangaphandle lweqanda. Gwema ama-clove ngoba lokhu kuzoshintsha ukhukhamba koketshezi onsundu.
I-Achar iyimbumba ebunjiwe yase-India ebunjiwe eyenziwe ngeviniga, isinaphi noma uwoyela we-sesame, izithelo (isb. Umango oluhlaza okotshani, uphayinaphu, amalimuni) nemifino (isb. Izaqathi, iklabishi) futhi okunezipayisi.
Inqubo yokukha amanzi ilula; i-pickling brine idinga ukwenziwa futhi ukudla kudinga ukulungiswa. Geza iziqukathi bese ugcwalisa kahle umkhiqizo. I-brine eshisayo iyothululelwa ngaphezulu bese iziqukathi zifakwe uphawu. Ipholile ngemuva kokubekwa uphawu nokuyigcina endaweni epholile emnyama.
Ezinye izindlela zibuye zibuze ukuthi imifino emisha ingezwe kwi-brine eshisayo. Lokhu-ke kuhlanganisiwe (ukugcina i-brine eyinqwathi), kugcwaliswe ezitsheni lapho i-brine yokukha amanzi ifakwa khona.
Ama-Recipes ayahlukahluka kepha iresiphi ejwayelekile ye-ukhukhamba i-brine ihlanganisa izingxenye ezilinganayo zamanzi noshukela uviniga (uyazikhethela) nosawoti kanye noketshezi olubilisiwe. Izinongo ezifana nama-peppercorns, imbewu yommbila eyomile, amaqabunga e-bay kanye nembewu yesinaphi noma isipuni esikhethekile esingafakwa nakho kungangezwa.
Abanye abapheki bangeza ama-beetroot emaqanda abiliswe kanzima ukuze banikeze umbala opinki emhlanga ohlukeni lweqanda elicwengiwe. Gwema ama-clove ngoba lokhu kuzoshintsha ukhukhamba koketshezi onsundu.
Sebenzisa i-canning noma i-kukha usawoti. Amanye usawoti aqukethe izengezo ezingenza umkhiqizo wokugcina ube ngamafu. Ungasebenzisi usawoti we-'ed-sodium'.
Uviniga omhlophe, i-apula cider, iwayini elimhlophe, noviniga welayisi wamaphesenti ayi-5 acid yonke isebenza kahle kepha gwema ukusebenzisa uviniga webhalsamu. Amaviniga amhlophe ngeke abangele ukuguquka kombala, kepha uviniga we-cider, yize enokunambitheka okuncane, wenza ukudla okufakwe emanzini kube mnyama.
I-acetic acid eseviniga ikhawulela ukungcola kwezinto ezincane ezinosawoti, nosawoti oqukethe i-calcium, igcina ukugcotshwa komkhiqizo owuthiweyo.
Izithelo noma imifino ingahlolongwa (imvamisa indlela esetshenziswayo ye-blanching) bese isikwa ibe yizicucwana ezincane ezinjengezimpawu zemidlalo, isikebhe noma amawundlu. Umkhiqizo omkhulu osikiwe waba izingcezu ezincane uvumela ukumunca okusheshayo koketshezi.
Kusekuncane nokuncane ukudla okusetjenzisiwe, i-crunchier umkhiqizo wokugcina ocwathiwe.
Ukushintsha Kobala Lwagaliki uma iLondoloziwe
I-Garlic iqukethe i-enzyme isoallin ehlangana ne-acidity ephenduka i-Garlic eyakhiwe ngesithelo ibe umbala oluhlaza okwesibhakabhaka. Ukuchayeka okuluhlaza okwesibhakabhaka nakho kudalwa ngokusebenzisa izinsimbi ezithile ezifana ne-zethusi kanye ne-iron iron ngesikhathi sokupheka.
Khetha ugarlic osukhulile (isoallin engaphansi) lapho ukha amanzi, sebenzisa amanzi anciphisiwe (azilandeli izinto ezifana ne-zethusi) futhi ungasebenzisi usawoti nge-iodine, njengosawoti wethebula. Lapho ukha igalikhi, kunconywa ukusebenzisa usawoti weKosher ukunciphisa lo mthombo.
Amanzi alukhuni namanzi e-chlorine kakhulu kufanele kugwenywe lapho kukha amanzi.